१३ गते ओलीले दुवै पद गुमाउँदै ? यस्तो छ प्रचण्ड-नेपालको रणनीति ! - Media Dabali
१३ गते ओलीले दुवै पद गुमाउँदै ? यस्तो छ प्रचण्ड-नेपालको रणनीति !
काठमाडौं- मंसिर १३ गतेका लागि नेकपा सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । यद्यपी नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवादले पार्टीभित्र उग्र तनाब सिर्जना गरेको छ ।
कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद झनै बढेको हो । प्रचण्डको प्रस्तावलाई टक्कर दिन अब बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले पनि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने दाहालको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन् । ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेर युद्ध छेडेका दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने आक्रामक तयारीमा जुटेका छन् ।
उनीहरु अब कसरी अघि बढ्ने ? भन्नेबारे नियमित छलफल र भेटवार्तामा जुटेका छन् । प्रचण्ड नेपालक्षले ओली सहमतिमा नआएमा नेकपाका दुवै पद छोड्न लगाएर नेकपामा ओलीको अस्तित्व नै समाप्त गर्नेसम्मको रणनीति जुटाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।